Ezona zithethi zingabinantambo zika-2017 | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Izithethi, elektroniki
Xa uthenga izithethi ezingenazingcingo, okokuqala kufuneka sithathele ingqalelo izinto eziguqukayo, kuba ngaphandle kokuzinikela inkqubo yonxibelelwano engenazingcingo ngeBluetooth okanye iWifi, ayizizo zonke eziyilelwe ukukususa apha ukuya apho.
Kwi-Intanethi sinokufumana inani elikhulu lezithethi ezingenazingcingo, phakathi kwe-10 ukuya kwi-25 ye-euro, zonke zinamagiya amaTshayina amancinci okanye angaziwayo, ahlala esenza ukuba sithandabuze malunga nomgangatho abanokusinika wona. Ukuzama ukukunceda kulo msebenzi, kweli nqaku siza kuncoma Izithethi ezilungileyo ezingenazingcingo zika-2017.
Kwaye xa ndibhekisa ku-2017, oko akuthethi ukuba bafikelele kwintengiso kulo nyaka wonke ukuba siza kuphela, kodwa okoko ukusungulwa kwabo, babonisa unyaka nonyaka, ukuba basengaphezulu kokhetho olusebenzayo namhlanje. ukusukela namhlanje, nangona uneminyaka embalwa ngasemva kwakhe.
Okokuqala, bendifuna ukucacisa ukugxeka kwam kwizithethi ezingasebenzisi zingcingo zeBluetooth ezikwixabiso lama-10 ukuya kuma-25 euros, kuba umgangatho wesandi kunye namandla anokusinika wona, ziphantse kwa ezo sinokuzifumana kwi-smartphone yethu, Ke ukuba sifuna ukuchitha imali, akukho ngxaki, kodwa ukufumana umgangatho kunye namandla afanayo, kungcono ukuchitha imali encinci, kwezinye iindlela endizicebisayo kweli nqaku.
1 Ifoto: Aukey SK-M30
2 UPhilips BM6B
3 Umbala weBose SoundLink II
4 I-Omni yoyilo
5 I-Bose SoundTouch 20 Series III
6 IHarman / Kardon Esquire Mini
7 Ukuhlawulwa kweJBL 3
8 B&O DLALA
9 UMarshall Kilburn
10 I-JBL Clip 2
12 I-Sony SRS-XB10L
13 I-Wonderboom ye-UE
14 JBL Yiya
15 Ingcebiso yoMhleli
Ifoto: Aukey SK-M30
Izithethi ezingenazingcingo zika-Aukey zisinika iziteshi ezimbini ze-10 W kubandakanya ii-subwoofers ezimbini, esivumela ukuba sonwabe sisandi esinamandla kunye neebhasi ezinamandla kakhulu. Ubomi bebhetri bufikelela kwiiyure ezili-12, nto leyo eyenza ukuba ilungele xa siceba ukuchitha usuku lonke kude nekhaya, ngenxa yebhetri ye-4.000 mAh. Ukuba asifuni ukusebenzisa uqhagamshelo lweBluetooth, sinokukhetha ukunxibelelana nezixhobo zethu okanye i-smartphone ngegalelo le-3,5 mm jack. Ixabiso: i-49 euro
Inkampani yaseDatshi iPhilips ikwasinika nezithethi ezingenazingcingo. Kufanelekile ukuba sikhankanye imodeli ye-BM6B, imodeli enikezela ukuzimela kweeyure eziyi-8, enganyangekiyo kukutshiza nothuli, ngoko ke singayibeka nakweliphi na igumbi lendlu yethu, okanye siyithathe xa sisiya kuhambo chitha usuku ngaphandle. Iyahambelana nenkqubo ye-Izzy, ke siyakwazi ukunxibelelana nezithethi ezi-5 kunye ne-Izzylink ukumamela umculo ofanayo kumagumbi ahlukeneyo. IPhilips BM6B inexabiso kwiAmazon ye125 euro.
Thenga iPhilips BM6B
Umbala weBose SoundLink II
Malunga ne-Bose eqinile, ndicinga ukuba akukho mfuneko yokuba sithethe kakhulu, kuba ngoku yenye yeenkampani ezisinika ezona mveliso zilungileyo kule meko, nokuba zii-headphone ezingenazingcingo okanye izithethi, ziqinisekisa udumo olunayo inkampani bekusoloko kunjalo. Umbala we-SoundLink II, ngaphandle kobungakanani bayo obuncinci, obubonelela ngokuphatheka ngokugqwesileyo, awunamanzi, uhambelana nonxibelelwano lwe-NFC, unebhetri yeeyure eziyi-8, iyahambelana noSiri kunye noGoogle ngoku kwaye singayisebenzisa njengezandla zasimahla. Ifumaneka ngemibala emi-4 kunye Inexabiso lama-euro angama-139.
Thenga iBose® SoundLink Umbala II
Kwinqanaba lezithethi ezingenazintambo, asinakufumana kuphela abo banxibelelana ngeBluetooth, kodwa sifumana nolunye udidi lwezithethi ezinxibelelana ngeWifi, ngaloo ndlela sandisa uluhlu lwesixhobo, ukuba nje ukuphakathi konxibelelwano ngaphandle kwamacingo.
Enye yezona modeli zibalaseleyo zokufika kwintengiso kulo nyaka nge-Creative Omni, isandisi-lizwi esisebenza ngesantya esiphezulu se-4-drive, ezimbini ze-1,5-intshi zeNeodymium zokuqhuba kunye noyilo lweradiyetha. Inendawo yokufaka amakhadi e-MicroSD. Iyahambelana zombini uSiri kunye noGoogle ngoku ngonxibelelwano lweBluetooth, iyamelana nokutshiza kwaye eyona nto inomtsalane yile bendikhankanyile apha ngasentla: uqhagamshelo lweWifi olunamagumbi amaninzi. Kunye Ixabiso kuma-113 euros kwiAmazon, yenye yezona ndlela zibalaseleyo ezikhoyo ngoku kwintengiso.
Thenga uOmni woBuchule
I-Bose SoundTouch 20 Series III
Kanye njengoko sicebise isithethi esiphathwayo esivela kwinkampani yakwaBose ukuba siyise naphina xa siyifuna, ndiziva ndinyanzelekile khankanya i-SoundTouch 20 Series III, Isithethi esisinika unxibelelwano ngeBluetooth ukongeza kwi-Wifi, njenge-Creative Omni, esivumela ukuba silawule ukudlala ngaphandle kweengcingo malunga nonxibelelwano lweBluetooth nangaliphi na ixesha.
Ngobunzima obuphantse bube zii-4 kg ayisisixhobo sokuyithatha ukusuka apha ukuya phaya, kuba yenzelwe ukuba isetyenziswe ekhayeni lethu kwaye sikwazi ukonwabela isandi esingqongileyo esisinikwayo, esihambelana nomculo ophambili wokusasaza iinkonzo okanye iDeezer, unganxibelelana nezinye izithethi kusapho lweSoundTouch ukumamela umculo ofanayo kuzo zonke izixhobo ... Ixabiso leBose SounTouch 20 Series III lifikelela Ii-euro ezingama-339 eAmazon.
Thenga iBose® SoundTouch ® 20 Series III
IHarman / Kardon Esquire Mini
Inkampani yakwaHarman / Kardon, ebisezantsi kancinane nje konyaka isezandleni zenkampani yaseKorea i-Samsung, isinika i-Esquire Mini, izithethi ezifumaneka ngemibala emi-5, ezinokuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezisi-8, kubandakanya umboko ophindwe kabini ukuze ukwazi ukuyisebenzisa njenge-hands-free ngenkqubo yokurhoxiswa kwengxolo. Ayenzelwanga ukonwabela ngaphandle, ke ukuba ujonga ukubanakho ekhayeni lakho, i-Esquire Mini inokuba yile nto uyikhangelayo ukuba ixabiso layo liyakulingana. Ii-euro ezingama-149 eAmazon.
Thenga iHarman / Kardon Esquire
Ukuhlawulwa kweJBL 3
Ngamandla e-watts angama-20 kunye nokuchasana namanzi kunye nothuli, i-JBL Charge 3 zizithethi zomhlaba wonke esinokuzithatha naphi na. Ibandakanya imakrofoni ephindwe kabini esivumela ukuba sonwabele inkqubo yokucinywa kwengxolo xa siyisebenzisa njenge-hands-free. Ibhetri ye-6.000 mAh isinika uluhlu lweeyure ezingama-20 kwaye amaxabiso ayo I-139 ye-euro kwiAmazon.
Thenga i-JBL CHARGE 3
U-Bang no-Olufsen basungule imodeli yokudlala kwimarike, imodeli apho ukubambeka kunye namandla zihlala khona ngokulinganayo. Ngaphandle kobukhulu bayo obuncinci, ibonelela ngee-bass ezigqwesileyo kunye namandla aphezulu e-2 × 140 watts, into ekunzima ukuyifumana kwizithethi zolu bungakanani nazo ziphathwayo. Ukuzimela yenye yezinto zawo, kuba kusinika Iiyure ezingama-24 zokudlala ngokuqhubekayo.
Ngokumalunga nokuphatheka, yenziwe ngealuminiyam kwaye iyamelana nothuli kunye nokutshiza, iyafumaneka ngemibala esi-7 kwaye iyasivumela ukuba siyidibanise nezinye i-B & O Play ukuze sifumane amava e stereo angenazingcingo. I-B & O Play ine Ixabiso lama-euro angama-249 kwi-Amazon.
Thenga i-B & O Dlala
Inkampani yaseMarshall eyindumasi isinika nezithethi ezingenazingcingo ukonwabela umculo esiwuthandayo ekhaya. Imodeli yaseKilburn, isinika uluhlu lweeyure ezingama-20, inevolumu yokulungelelanisa ii-bass, i-treble, enkosi kwisithethi esiphambili kunye nezithethi ezibini eziziisekondari kumaza aphezulu, kunye namandla okuphuma kwama-25 w. Ixabiso le IMarshall Kilburn inyuka yaya kwi-217 euro kwiAmazon.
Thenga uMarshall Kilburn
I-JBL Clip 2
I-JBL Clip 2 yenzelwe ukuba ihambe nabo naphi na, njengoko isinika isiqinisekiso se-IPX 7 ukongeza ekwenzeni izinto ezingaxhathisiyo. Ngokuba nomboko, sinokuphendula iminxeba. Ukuzimela kwayo kufikelela kwiiyure ezisi-8, into efanelekileyo ukuba siceba ukuchitha usuku lonke kude nekhaya kwaye sifuna ukonwabela umculo esiwuthandayo. Iyafumaneka ngemibala emi-5 kunye Ixabiso lentengo ngama-euro angama-49.
Thenga i-JBL Clip 2
Ukuba ufuna isithethi esinganyangekiyo kukutshiza kunye nothuli, ukusithatha naphina usifuna, i-UE Boom 2 isinika ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-15 kwindawo encinci. Ngokomgangatho wesandi, usinika i-bass enamandla kakhulu, nokuba sibeka isixhobo kumandla aphakamileyo. I-UE Boom 2 inexabiso kwiAmazon ye131 euro.
Thenga i-UE Boom 2
U-Sony unenani elikhulu lee-headphone, zombini ezinentambo kunye ezingenazingcingo ezikumgangatho wazo kunzima kakhulu ukuphikisana nawo. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kule minyaka idlulileyo, ikwazile ukuzisa loo mgangatho nakwizithethi ezingenazingcingo kunye nomzekelo ocacileyo wento endithetha ngayo zii-SRS-XB10L, izithethi ezineeyure ezili-16 zokuzimela, ezifumaneka ngemibala eyahlukeneyo kunye uyilo olumbeneyo lwenza ukuba kube lula ukuthatha naphina ngaphandle kokukhathazeka ngendawo abanokuhlala kuyo. I-Sony SRS-XB10L, iyafumaneka kwiAmazon ye kuphela yi-49 euro.
Thenga i-Sony SRS-XB10L
Ewe, siphinde sathetha ngolu phawu, olwazileyo ukufumana indawo yentengiso, ngenxa yomgangatho wezixhobo zalo. Imodeli yeWonderboom isinika ukuphatheka, ngokuzimela okuncinci kancinci kunemodeli yeBoom 2, iiyure ezili-10. Isinika i-bass enamandla kwaye icacile kwaye iyamelana ukuyithatha naphina apho sifuna khona, kuba iyamelana namanzi nothuli. I-UE Wonderboom inokudityaniswa nesinye isixhobo se-UE Wonderboom ukonwabela kabini. I-UE Wonderboom iyafumaneka ngemibala emi-6 kwaye inayo Ixabiso lama-euro angama-79 kwi-Amazon.
Thenga i-UE Wonderboom
Kodwa ukuba asifuni ukuchitha imali eninzi kwizithethi ezingenazingcingo, kodwa sifuna ukufumana umgangatho ngexabiso elifanelekileyo, inkampani yeJBL isinika imodeli yokuhamba, isithethi sikwakhona kwinani elikhulu lemibala, kunye Ukuzimela kweeyure ezi-5 kunye Ixabiso lakhe li-euro ezingama-28. Ukuba ujonga umgangatho ngexabiso elifanelekileyo kwaye ukuzimela akuyongxaki, iJBL Go inokuba yile nto uyifunayo.
Thenga iJBL Yiya
Ukulandela umgca weereferensi zangaphambili, Somlomo we Bang etsala umdla kuyilo lwayo. Ngokugqitywa kokudibanisa ilaphu kunye nesiseko seerabha, iyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini, Ubusuku obuBlue kunye noMnyama oMnyama; ii-shades ezimbini ezibonakala ngokungafaniyo nangobungangamsha bazo. Esi sithethi asihlali nje sinomtsalane kwaye sinobunzima - sinaso Imilinganiselo ye-189 x 85 x 49 yeemilimitha-, kodwa ikwabonelela ngamandla kunye nokuzimela kwisayizi encinci: ibandakanya Isithethi se-8W kunye nokuzimela ukuya kuthi ga Iiyure ezingama-7 zokusebenzisa ungaphazanyiswa. Ngokukhawuleza ngababini kuzo zonke iintlobo zezixhobo ezihambelanayo Itekhnoloji yeBluetooth.Kwelinye icala, imodeli Somlomo omkhulu inokuhanjiswa ngokulula ukusuka kwenye indawo iye kwenye ukubulela kumqheba wayo owakhelweyo kunye nemilinganiselo yayo -I-160 x 300 x 76 millimeters.
Kukulungele ukuyihambisa phakathi kwamagumbi endlu ngokulula. Ikhutshwe nge isithethi se-20W Kunye nebhetri ye-4400 mAh, eqinisekisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-10 zokusetyenziswa ngaphandle kokusika. Kwaye njengesixhobo seBang Somlomo, inxibelelana ngokukhawuleza kwiselfowuni okanye ithebhulethi Bluetooth.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Ezona zithethi zingabinazingcingo zika-2017